Miaro ny Fitiavan-tanindrazana Ilay Talen’ny Famoahana Amin’ny gazety Shinoa Mpanadrohadro – Global Times – Tao Amin’ny Tafatafa Vaovao · Global Voices teny Malagasy
Miaro ny Fitiavan-tanindrazana Ilay Talen'ny Famoahana Amin'ny gazety Shinoa Mpanadrohadro – Global Times – Tao Amin'ny Tafatafa Vaovao
Voadika ny 06 Novambra 2015 2:37 GMT
Hu Xijin niarahaba ireo mpijery tamin'ny andiany voalohany tamin'ny fandaharany tafatafa vaovao. Dikasary.
An-taonany maro izay, lasa hàlam-bavoaka ny Global Times, fandaharana rantsa-mangaikan'ny People’s Daily izay tantanan'ny fanjakana ao Shina, noho ny fitondràny hatrany ny nasiônalisma amin'ny vaovao malaza. Hu Xijin no lehibe mitarika ny fanontàna an-taratasy ilay gazety.
Hitam-bahoaka ho toy ny olona mamiratra i Hu, manana toetra tena mirona fatratra any amin'ny elatra havia, izay mampiasa ny Global Times mba hitsaràna ny governemanta amin'ny fanindrahindràna be ny fitiavan-tanindrazana sy ny nasiônalisma — hevitra roa neken‘ireo tomponandraikitry ny Antoko Kaominista Shinoa tato anatin'ny taona vitsivitsy. Nanamafy ny fielezan'ny zavatra natonta ihany koa ireo heviny mahatonga resabe hatrany.
Vao haingana izao, nanapa-kevitra ny hampalaza ny tenany sy ireo fijeriny i Hu tamin'ny fomba hafa — tafatafa amin'ny Aterineto. Natao ny volana Septambra 2015 ny andrany voalohany, fony izy nanao fisehoana tamin'ny lahatsary fohy miaro ny kaominisma ho valinkafatry ny tsikeran'ilay olo-malaza Shinoa amin'ny resaka tany sy trano, Ren Zhiqiang, ny amin'ny fanamarinana ny Ligin'ny Tanora Kaominista hoe “mpandova ny kaominisma isika.”
Ankehitriny, nanomboka nanao tafatafa an-tsehatra vaovao ao amin'ny Aterineto i Hu– “Miresaka i Hu” na Hu Kan amin'ny teny Shinoa. Milaza amim-pireharehàna izy fa io no “tafatafa an-tsehatra Shinoa voalohany maneho hevitra momba ireo vaovao malaza maneran-tany ,” ary tamin'ilay andiany voalohany, nikapoka ny fampiasana ilay fiteny mandreraka hoe Shinoa “tia tanindrazana”, izy.
‘Karazan'olona toy inona àry no namorona izany teny ratsy be izany?’
Nandefa ny andiany voalohany tao amin'ny Weibo, ilay mitovy amin'ny Twitter fa Shinoa, i Hu, miaraka amin'izao hafatra izao:
Hatramin'ny nandaniako ny androko tamin'ny resaka hevitra, tsy hiala amin'io intsony aho. Tena “naha lehilahy” [lehilahy noterena hiditra ao amin'ny tafika ho an'ny adinà foto-kevitra] miasa ho an'izao vanim-potoana izao, ny Global Times. Fa raha miha antitra fotsiny aho dia manana zo hihemotra. Androany, miverina ao amin'ny Weibo aho miaraka amin'ny fandaharana lahatsariko “Hu Kan,” fijerena ireo lanjan'i Global Times sy izaho. Manome adidy antsika rehetra ny vanim-potoana iainantsika, ary hanao ny azoko atao rehetra aho mba hahatomombana izany andraikitra izany. Jereo amin'ny hoe “Hu Kan” fotsiny aho. Tiavo ny fahasamihafàna ary ho ela velona anie ny fitambarana.
Natombony haingana ny fampisehoana, izay nisokatra tamin'ny ampahana sarimiaina iray vita tamin'ny fomba matianina manasongadina azy ihany, amin'ny firesahana ireo lafiny politika izay nifamatotra taminy. Niezaka ny nandroso ny “tena Hu Xijin“ izy avy eo, tamin'ny fampahatsiahivana ny fidirany tany amin'ny anjerimanontolo taorian'ilay Revôlisiôna ara-kolontsaina nisamboaravoara be iny — ilay hetsika mahery setra nataon'ny filoha Mao mba hanesorana tanteraka ao amin'ny fiarahamonina Shinoa ireo zavatra hita ho manohitra ny kaominista — ary ny fotoana niasàny ho mpampifandray an'ady tany Bosnia-Herzegovina.
Nandritra io resaka farany io, nampiasa ny fahaizany ny fiteny vahiny izy mba hanamelohana ny fampiasana ny teny hoe “mpangalatra tia tanindrazana” ao amin'ny Aterineton'i Shina mba entina milaza ireo mifofotra loatra na mihoa-pefy amin'ny fitiavan-tanindrazany:
Nisy fotoana, nahatezitra olona ny teny sasany tao amin'ny Aterineto. Ny hoe “mpangalatra tia tanindrazana” io teny io. Tamin'ny nahitako voalohany io teny io, tena nahataitra ahy izy io. Karazana olona toy inona àry no namorona ny teny ratsy be toy izany? Fa io izy io, mivezivezy any amin'ny Aterineto… Fantatro io amin'ny teny Anglisy, Rosiana ary Serba, tsy afaka apetakao miaraka ny teny hoe “tia tanindrzana” sy “mpangalatra”. Misy mihebohebo mihintsy anefa [ny olona sasany]. Ny Shinoa ihany no namorona io karazan'olona io! Ankehitriny manaratsy foana ny fitiavan-tanindrazana ny olona sasany. Amin'ny ady ara-poto-kevitra arahana na ara-politika, milaza izy ireo, “tia ny firenena aho fa tsy tia ny governemanta” na ny mitovy amin'izany. Namorona antony maro [izy ireo].
Guan Xin, mpandika teny miasa ho an'ny tenany manokana, nanohitra haingana ny fomba fijery feno hosok'i Hu tao amin'ny Weibo:
Misy ihany koa ny teny hoe “patrioteer” amin'ny teny Anglisy, entina ilazana ny “olona iray mahazo tombotsoa manokana amin'ny anaran'ny fitiavan-tanindrazana.” Tsy mbola naheno io fiteny io natao ho “henatry ny Anglisy aho.” Tsy tokony ho “mahamenatra” na “tsy misy hajany” ilay teny. Rehefa entina milaza olona ihany izy ireo no mahazo izany fanavahana izany. Amin'ny teny hafa, ny fametrahana ny teny sasany hoe “henatry ny Shinoa” no tena henatry ny Shinoa.
‘Mpangalatra tia tanindrazana efa fahita’
Ny taona 2012, nanoratra lahatsoratra nandroso hevitra i Hu hoe tokony “mba miezaka ny vahoaka hahatakatra ny kolikoly madiniky ny mpiasam-panjakana Shinoa” . Iray taona taty aoriana monja, toa nanohitra ny fitiavan-tanindrazany izy ary nampihatra ireo teniny ireo.
Ny volana Septambra, nivezivezy tao amin'ny Aterineto ny sarinà taratasy ofisialy iray, nampiseho fa namoaka fampitandremana an'i Hu ny Kaomitin'ny Fitantanana ny People’s Daily, Hu izay nanatrika atrikasan'ny media Shinoa-Alemàna ary nandany ny tetibola nomena azy mba hikarakaràna ireo vahininy nandritry ny telo andro nitetezany an'i Polôna tamin'ny lohataonan'ny taona 2013.
Mpampiasa Weibo iray nahita ireo tenin'i Hu ho mifanohitra amin'ny toetrany ety amin'ny fiainana tena izy:
Mihira ny hiran'ny fitiavan-tanindrzana sady mitsangantsangana amin'ny volam-bahoaka, resaka fitadiavam-bola fotsiny ny hoe fitiavan-tanindrazana. Mpangalatra tia tanindrazana efa fahita i [Hu].
Mpampiasa Weibo iray hafa nanoaro hevitra an'i Hu mba hampiasa ny toerany ho lasa feon'ny tsikera izay tena ilain'ny fiarahamonina Shinoa fatratra:
Tsy niova tamin'ny fanompoany ny [governemanta] i [Hu] ary tokony hihira mora kokoa ny fideràny noho ny ataony ankehitriny. Mila feo mpitsikera ny firenena. Mila hevitra mahasoa daholo ny filoha isaky ny vanim-potoana rehetra, na ny filoha Xi aza, tsy mahasoa ny manindrahindra fatratra azy. Tsy mbola naheno olona nandroso tamin'ny fanindrahindraina sy fihiràna fideràna [ny mpitarika ambony] aho. Manantena aho fa hahita ny sosokevitro ianao.
Hatramin'ny nampiakàrana ny resany an-tsehatra tao amin'ny Youku, ilay vohikalanà lahatsary Shinoa lehibe indrindra, efa maherin'ny 200.000 isa no nojerena io tao anatin'ny roa andro, na nofenoin'ireo mpisera amin'ny Aterineto hevitra ratsy aza ny toerana fanehoana hevitra.